Mandroso Ny Fahalalahan’ny Fanaovan-gazety Rosiana ny Lakozian’ny Kremlin · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2013 14:04 GMT
Novaya Gazeta, iray amin'ireo gazety mpanohitra antitra indrindra ao Rosia, dia nampiditra an'i Evgeny Prigozhin izay tompon'ilay trano fisakafoanana tena ankafizin'i Vladimir Putin, tao anatina raharaha hafahafa mba handisoana ireo sehom-baovao maro mavesa-danja indrindra any amin'ny firenena. Araka ny nolazain'i Novaya, ny “Concord” an'i Prigozhin, orinasa mpikarakara sakafo mifandraika amin'ny Kremlin [ru] dia tafiditra anatina firaisana tsikombakomba avo lenta mba hanaparitahana vaovao tsy marina any amin'ireo gazety maro ao Rosia, miendrika dokambarotra, mba handresena lahatra ny vahoaka fa ahofa ilay vaovao.
Ny exposé [ru] tao amin'ny Novaya ny 19 Jona 2013, nosoratan'i Nina Petlyanova, dia niditra antsipiriany momba ny firaisana kombakomba misy iadiana amin'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety ao Rosia, ka namoaka ny lisitr'ireo fivezivezena an-tseranana (feno niaraka tamin'ny mombamomba ny Pasipaoro), namoaka an-tsokosoko ireo rakitra anatiny, ary ireo fifandraisana mampiahiahy maro misy eo amin'ny olona sasany.
Efa imbetsaka no nilazan'i Petlyanova tao anatin'ny lahatsorany fa nahazo porofo maro hanohanana ny fiampagàny an'i Prigozhin ny gazety hanoratany. Tao anatin'ilay lahatsoratra antsoiny hoe “Masha Hari” (lalao ao Mata Hari), no nahalalan'ny mpamaky fa nandefa mpitsikilo hiasa ao amin'ny sampana fanoratana ao amin'ny gazety Novaya ilay gazety “GoG” mpamaky bantsilana, mifandraika amin'ny Concord, raha toa kosa ka lasa mpitsikilo no sady mpiasa ao amin'ny Novaya izy, ka nahazoan'ny gazety alalana hijery ireo resaka rehetra voalaza etsy ambony etsy ireo.
Ny iray amin'ireo tranga mahatalanjona indrindra amin'ilay hetsika iadiana amin'ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety any Rosia dia tsy ahitana gazety, fa kosa ilay mpanoratra sy poeta Dmitri Bykov ihany. Ny faran'ny volana Febroary, tamin'ny fiatombohan'ity taona ity, namoaka lahatsoratra ilay gazety mpamaky bantsilana “Gazety momban'ny Gazety” (na “GoG,” voalaza tetsy ambony), momba an'i Bykov nandeha [ru] tany amin'ny tanàna ivelan'i Sverdlovsk, izay nanohanany mpandraharaha iray ho amin'ny toerana politika, amin'ny sarany 15 000 dolara. Namoaka antontan-taratasy avy amin'ny olona antsoina hoe Sergei Solovev ny GoG, ilay mpandraharaha nandray an'i Bykov ho ao Sverdlovsk no nandefa io ny 23 Febroary, ora vitsivitsy rehefa avy niantsehatra ilay poeta. Nanambara anefa i Solovev fa vazivazy nataony hamiahana ihany ny fampielezan-keviny hijereny raha afaka ny handray olona avy amin'ny mpanohitra izy ho mersenera hanohana azy.
Taoriana kelin'izay Maxim Ivanov, solombavam-bahoaka ao amin'ny Antienimiera ao Sverdlovsk, dia nanambara [ru] tao amin'ny LiveJournal fa manao antso izy ho an'ireo mpanao fanadihadiana ao an-toerana mba hanamarina raha nandoa ny hetra miala amin'ny karamany i Bykov. Taorian'ny lahatsoratra blaogy dia i Bykov mihitsy no namoaka ny hevitra [ru] voalohany, tamin'ny fandavany ilay filazana fa niantoka ny fampielezan-kevitra ara-politikan'i Solovev izy, ary nanamafy fa mandoa ny hetra amin'ny karamany foanaizy. (Tany an-kafa [ru] anefa i Bykov dia nilaza fa raha ny marina tsy tokony takian'ny fanjakana eo noho eo ny hetra raha vantany vao mandray ny karama ny olona.) Tsy kivy ary angamba mety sosotra kely tamin'ilay fomba fanehoan-kevitra tamin'ilay lahatsoratra Ivanov dia namaly [ru], tamin'ny filazana fa olona tsy azo atokisana i Bykov, ary nanome toky fa hijery akaiky ny antso nataony tamin'ireo mpanao fanadihadiana. Ny 7 May 2013, gazety tao an-toerana iray no nanamafy [ru] fa nanokatra fanadihadiana mikasika ny vola miditra amin'i Bykov ny Kaomity mpanadihadin'i Sverdlovsk.
Tsy i Ivanov irery ihany no lasibatra taorian'iny “famborahan'ny GoG” iny. Mazava izao fa misy olona mandefa tambajotra hampielezana iny raharaha iny, noho ny LiveJournal sy Twitter rakotra lahatsoratra fohy ahitàna ny tenifototra “#ПродажныйБыков” (Bykov feno kolikoly). Ny 28 Febroary 2013, nampiakatra lahatsary [ru] koa Artem Simonov, mpampiasa YouTube mamely an'i Bykov (izay naverin'ny GoG nampiakarina), namerina ireo fiampangan'i Solovev. Ilay lahatsary, ahitàna dikateny tsy mifandraika sady mandiso hevitra, no hany lahatsary nampiakarin'i Simonov tao amin'ny YouTube. Olona 300 no efa nahita ilay lahatsary, nefa tao anatin'ny herinandro fotsiny izany rehetra izany, ary nanomboka tamin'izay dia tsy nisy nahita intsony ilay lahatsary. Nizara ilay lahatsary koa ny sasany amin'ireo bilaogera mpanohana ny fitondrana, tahaka an'i Kristina Potupchik sy mpampiasa LJ Fritzmorgen [ru].
Tao amin'ny Facebook sy LiveJournal [ru], nampiakatra zavatra manohitra ny fanakianan'ilay poeta i Bykov sy ireo mpankafy azy. Manana bala vaovao hanoherana ilay mpiapanga azy indray izany izy ireo tamin'ny alalan'ilay fanambarana navoakan'ny gazety Novaya Gazeta iny, kanefa loza manambana vaovao ny fahalehibiazan'ilay fanaratsiana miely momba an'i Bykov sy ireo gazety Rosiana maro.